သူ နငျ့ကို သိပျခဈြတာပဲ တဲ့ … ခဏလောကျရီပါရစေ – Shinyoon
တဈခါတဈလမှော လူတှအေားကနြတေဲ့ကိုယျ့ဘဝမှာ ကိုယျကိုယျတိုငျကတြော့ ငရဲကနြသေလိုပါပဲ ဒီအဖွဈအပကျြတှကေို ဘယျသူ့ကိုပဲ ရှငျးပွရှငျးပွ ဘယျသူမှ ယုံမှာမဟုတျကွဘူးလေ …ပွောရငျ ပွောမိတဲ့ကိုယျကပဲ ရူးတယျလို့ထငျတတျကွတယျ …
သူနငျ့ကို သိပျခဈြတာပဲ တဲ့ သူငယျခငျြးတှကေ ပွောကွတယျ ကြှနျမ သိပျရီခငျြတာပဲ ငိုနိုငျတဲ့ အငျအားတှမေရှိတော့ဘူးလေ … ပွီးတော့ ပွနျရှငျးပွနိုငျတဲ့အားအငျးတှလေဲမရှိတော့ဘူး ပြျောခငျြယောငျဆောငျပွီးပဲ ရီပွလိုကျတယျ .. တကယျတမျးနားထဲမှာ အဲ့စကားက မိုးကွိုးပဈခသြလိုပါပဲ သိပျတော့ မသာယာလှဘူး …
နငျ့ကိုကွညျ့ပွီး အားကလြိုကျတာဆိုတဲ့လူတှနေဲ့ကိုယျ့ဘ၀ လဲပေးလို့ရရငျ လဲပေးလိုကျခငျြတယျ ဒါမှသူတို့စာနာတတျကွမှာလေ … တခြို့လူတှကေ သိပျကို ဟနျဆောငျကောငျးတယျလို့ပဲပွောရမလား သိပျကို ကောကျကဈြတယျလို့ပဲ ပွောရမလား သခြောတာတဈခုက လူတှေ ဘယျတော့မှ အဆိုးမမွငျခံရဘူးလေ
ကြှနျမကို ပဈထားတဲ့အခြိနျတှကေို လူတှမေသိဘူး ကြှနျမကို နာကငျြစခေဲ့တာကို လူတှမေသိဘူး လူတှရှေရေ့ောကျရငျ သူက သိပျဂရုစိုကျပွတတျသလို သိပျလဲကွငျနာတတျတယျ မကျြစိအောကျကနေ မပြောကျအောငျကို သညျးသညျးလှုပျခဈြပွတယျ ကြှနျမပြျောရမှာလား
ကြှနျမပြျောတော့ဘူး … ကိုယျခံစားရတဲ့အခါ တိတျတိတျလေး ငိုကွှေးဖွဈပမေယျ့ သူနာကငျြရတဲ့အခါ တဈလောကလုံးကို လိုကျပွတယျ လူတှအေမွငျမှာ ကြှနျမပဲ အလိုကျမသိတဲ့ကောငျမလေးပေါ့ ဒါမှမဟုတျသိပျကိုဆိုးသှမျးနတေဲ့ လူဆိုးလေးပေါ့ …. ဒါကွောငျ့ ကြှနျမဘာဖွဈနတောလဲ မရှငျးပွဖွဈတော့တာပါ
သူ နငျ့ကို သိပျခဈြတာပဲ တဲ့ သူငယျခငျြးတှကေ လာပွီး အားကပြွတယျ ဟားဟား … ခဏလောကျရီပါရစေ … ကိုယျနာကငျြနရေတာကိုယျပဲ သိသလို သူ့ရဲ့မကျြနှာအမှနျကို ကိုယျပဲ မွငျရပါတယျ …
သူ နင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ တဲ့ … ခဏလောက်ရီပါရစေ
တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတွေအားကျနေတဲ့ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျတော့ ငရဲကျနေသလိုပါပဲ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်သူ့ကိုပဲ ရှင်းပြရှင်းပြ ဘယ်သူမှ ယုံမှာမဟုတ်ကြဘူးလေ …ပြောရင် ပြောမိတဲ့ကိုယ်ကပဲ ရူးတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ် …
သူနင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ် ကျွန်မ သိပ်ရီချင်တာပဲ ငိုနိုင်တဲ့ အင်အားတွေမရှိတော့ဘူးလေ … ပြီးတော့ ပြန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အားအင်းတွေလဲမရှိတော့ဘူး ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပဲ ရီပြလိုက်တယ် .. တကယ်တမ်းနားထဲမှာ အဲ့စကားက မိုးကြိုးပစ်ချသလိုပါပဲ သိပ်တော့ မသာယာလှဘူး …
နင့်ကိုကြည့်ပြီး အားကျလိုက်တာဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်ဘ၀ လဲပေးလို့ရရင် လဲပေးလိုက်ချင်တယ် ဒါမှသူတို့စာနာတတ်ကြမှာလေ … တချို့လူတွေက သိပ်ကို ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလား သိပ်ကို ကောက်ကျစ်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား သေချာတာတစ်ခုက လူတွေ ဘယ်တော့မှ အဆိုးမမြင်ခံရဘူးလေ
ကျွန်မကို ပစ်ထားတဲ့အချိန်တွေကို လူတွေမသိဘူး ကျွန်မကို နာကျင်စေခဲ့တာကို လူတွေမသိဘူး လူတွေရှေ့ရောက်ရင် သူက သိပ်ဂရုစိုက်ပြတတ်သလို သိပ်လဲကြင်နာတတ်တယ် မျက်စိအောက်ကနေ မပျောက်အောင်ကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတယ် ကျွန်မပျော်ရမှာလား
ကျွန်မပျော်တော့ဘူး … ကိုယ်ခံစားရတဲ့အခါ တိတ်တိတ်လေး ငိုကြွေးဖြစ်ပေမယ့် သူနာကျင်ရတဲ့အခါ တစ်လောကလုံးကို လိုက်ပြတယ် လူတွေအမြင်မှာ ကျွန်မပဲ အလိုက်မသိတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ ဒါမှမဟုတ်သိပ်ကိုဆိုးသွမ်းနေတဲ့ လူဆိုးလေးပေါ့ …. ဒါကြောင့် ကျွန်မဘာဖြစ်နေတာလဲ မရှင်းပြဖြစ်တော့တာပါ
သူ နင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လာပြီး အားကျပြတယ် ဟားဟား … ခဏလောက်ရီပါရစေ … ကိုယ်နာကျင်နေရတာကိုယ်ပဲ သိသလို သူ့ရဲ့မျက်နှာအမှန်ကို ကိုယ်ပဲ မြင်ရပါတယ် …